Fampisehoana vaovao manaitra maromaro ao amin'ny Yahoo Mail 5.0 | Androidsis
Yahoo Mail 5.0 dia manana endrika vaovao, fomba vaovao hidirana sy hitantanana kaonty tsy Yahoo
Yahoo Mail dia safidy iray hafa ananantsika, ankoatr'ireo Gmail sy Hotmail fanta-daza, mankany raiso ireo mailaka ny fifandraisana sy ny karazana mpandefa. Mpanjifa mailaka manana traikefa nahafinaritra ary roa herinandro lasa izay dia navaozina ho Material Design avy amin'ny beta. Famolavolana fitaovana izay mitondra fahatsapana hafa ho antsika rehefa mandefa ny fampiharana avy amin'ny fitaovana Android izahay.
Navoaka izao ny kinova farany 5.0, izay ankoatr'ireo fiovana hita maso avy amin'ny tanan'ny Material Design dia misy vitsivitsy endri-javatra vaovao izay tsy azontsika hadino, na ho an'ny fampiharana na ho an'ny tranonkala. Ny Yahoo Account Key dia fomba fidirana vaovao nefa tsy mila mampiditra ny teny miafina amin'ny fotoana rehetra, izay hodinihintsika amin'ny antsipiriany etsy ambany.
1 Fomba fijery vaovao amin'ny Design Material
2 Fampisehoana vaovao
Fomba fijery vaovao amin'ny Design Material
Yahoo dia nampiasa ny torolàlana momba ny famolavolana Material Design, saingy nahavita azy tamin'ny fombany manokana. Izy io dia manana kisary vaovao, misy bokotra iray mitsingevana hanatanteraka karazana hetsika rehetra sy ny tontonana fitetezana ny lafiny. Ny tsy itovizany dia ny loko, fa tsy ny fiaramanidina hitantsika matetika amin'ny fampiharana marobe ao amin'ny Play Store, Yahoo dia nisafidy lokon'ny loko miloko volomparasy hatramin'ny manga.
Un gradient izay ho hitantsika isaky ny zoro sy cranny ny fampiharana toa ny eo amin'ny menio sisiny, eo amin'ny fikirana na io bokotra FAB io ihany. Andao lazaina fa eto ireo tsipika famolavolana ho an'ny loko fisaka dia nesorin'ny mpiadin'omby kely mba hanomezana fanavahana.
Soa ihany fa tsy misy ny zava-drehetra eo amin'ny sary, Yahoo Mail 5.0 mitondra vaovao sasany holazaina ary izany dia hanome fomba iray hafa hanombohana ny fivoriana efa nahazatra anay tamin'ireo mpanjifa mailaka samihafa azontsika idirana.
Yahoo Account Key dia iray amin'ireo manaitra indrindra, ary izy io dia fomba vaovao ahafahana miditra tsy mila mampiditra ny teny miafina foana. Fa kosa, miankina amin'ny fampandrenesana fanosehana izay alefa amin'ny finday. Tsindrio ny bokotra fidirana ary hiditra mivantana isika. Ny hany tokony hitandremana dia tsy eo an-tanan'olona ny telefaona rehefa hahazo ny iray amin'ireo fampandrenesana ireo isika.
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe indrindra koa ny fahaizana atolotry ny Yahoo Mail 5.0 ankehitriny midira amin'ny mpanjifa hafa toy ny AOL Mail, Hotmail, ary ny Outlook.com. Raha ny tokony ho izy, ireo zava-baovao roa manaitra ireo dia misy ihany koa amin'ny kinova tranonkala.
Tonga ireo fanovana hafa singa mavitrika kokoa hanisy marika ny mailaka ho vakiana na tsia. Mikorisa amin'ny ilany havia hamafana ny mailaka ary toy ny ankehitriny Flickr no manome ny avatars an'ny mpifandray aminao. Ary farany, manana ny fahaizany mampifandray amin'ny Facebook, LinkedIn na Twitter izahay hahazoana sary, ary Smart Search, izay hanampy anay hahita hafatra sy firaketana haingana.
Ny fanavaozana vonona avy ao amin'ny Play Store izy io amin'izay ianao afaka mandeha any amin'ny fampiharana hanavao azy tsara avy amin'ny widget eto ambany.
Yahoo Mail - mikarakara E-Mail-Postfach
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Yahoo Mail 5.0 dia manana endrika vaovao, fomba vaovao hidirana sy hitantanana kaonty tsy Yahoo
Ampahafantaro, ny fampiharana Facebook vaovao izay te handresy ny fampandrenesanao amin'ny vaovao amin'ny fotoana mety
Ny taratasy dia ny vinan'i Dropbox vaovao momba ny fomba hiarahan'ny ekipa miasa